खेलकुद - चैत्र २४, २०७५, आइतबार, बराहक्षेत्र
पाहुना टोलि डाउफिन्स क्लब क्याम्रुन सुनसरीको बराहक्षेत्र –५, कालाबन्जरमा जारी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित भरौल गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश गरको छ । आइतबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा पाउना टोलि डाउफिन्स क्लब क्याम्रुनले चर्च ब्वाइज क्लब काठमाडौलाई पराजित गर्दै डाउफिन्स क्लब फाइनलमा पुगेको हो।
डाफिउन्स क्लब क्याम्रुनले ० को विरुद्ध १ गोल गर्दै चर्च ब्वाइज क्लब काठमाडौ लाई पराजित गर्दै आफ्नो फाइनल स्थान सुरक्षित गरेको हो । ज.डे.ज.खेल मैदानमा भएको पहिलो सेमिफाइनल खेल पहिलो हाफमा कुनै गोल हुन सकेन ।
दोस्रो हाफको पाचौं मिनेटमा डाउफिन्सका अहान्दको प्रहारलाई क्याम्रुनका जर्सी नम्बर १८ ओगअन आर.जे हेड गरेर गोल गरेका थिए । क्याम्रुनका बि. बेलेमलाई चेन्ज गर्दा ढिलो निस्केको भन्दै रेफ्रीले पँहेलो हुदै रेड कार्ड पाए र डाफिन्स क्लब १० खेलाडीमा सिमित रयो
उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका डाफिउन्स क्लबका ओगअन आर.जे. म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनलाई मुन बिम एकेडेमीका पिन्सिपल देबेन्द्र बिष्टले ५ हजार रुपैयाँसहित ट्रफि प्रदान गरे ।
सोमबार दोस्रो सेमिफाइनल गत वर्षको बिजेता रेड हर्ष क्लब इलाम र आयोजक न्यु स्टार क्लब बराहक्षेत्र बीच प्रतिष्पर्धा हुने छ । २७ गते सम्म सञ्चलान हुने सो प्रतियोगिताका बिजेताले ३ लाख र उपविजेताले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।